कोरोना भाइरस : ५० वर्षमुनिकाको मृत्यु संख्या विकसित देशको तुलनामा नेपालमा बढी | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कोरोना भाइरस : ५० वर्षमुनिकाको मृत्यु संख्या विकसित देशको तुलनामा नेपालमा बढी
कोरोना भाइरस : ५० वर्षमुनिकाको मृत्यु संख्या विकसित देशको तुलनामा नेपालमा बढी
अशोज २१ गते, २०७७ - ०८:५७
काठमाडौं। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु भएकामध्ये २९.६ प्रतिशत ५० वर्षमुनिका छन् ।
आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ – मंगलबारसम्मको तथ्यांकअनुसार कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या ६ सय ६३ पुगेको हो । त्यसमध्ये १६९ जना ५० वर्ष मुनिका छन् । त्यसमा पनि ४० देखि ४५ वर्षसम्मका धेरै छन् । मृत्यु हुनेमा ७० प्रतिशत ५० वर्षमाथिका छन् ।
नेपालमा ५० वर्ष मुनिकाको मृत्यु संख्या विकसित देशको तुलनामा बढी भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए । ‘कारणबारे थप अध्ययन हुनुपर्छ,’ उनले भने । ‘कम उमेर छ भन्दैमा ढुक्क हुने अवस्था छैन, रोगसित लड्ने क्षमता कति छ भन्ने कुरामा भरपर्छ,’ उनले भने ।
नेपालमा युवा उमेरका मानिसको कोभिड-१९ ले हुने मृत्यु विकसित देशको तुलनामा बढी रहेको विज्ञहरुले जनाएका छ्न । विकसित देशको तुलनामा ७० वर्षमाथिका वृद्धहरुको संख्या कम हुनु र बढी मात्रा युवा समुहमा नै कोरोना संक्रमण हुनुले ५० वर्ष मुनिका व्यक्तिको मृत्यु बढी भएको उनीहरुको तर्क छ ।
कम उमेरका भए पनि उनीहरु कुनै न दीर्घ रोगबाट प्रभावित भएकाले यो उमेरमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हुन सक्ने राष्ट्रिय इपिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डा. बाबुराम मरासिनीको विश्लेषण छ ।
अशोज २१ गते, २०७७ - ०८:५७ मा प्रकाशित